3000 Afọ Ochie Mummy Tattoo - Atụmatụ Echiche Tattoos
3000 Afọ Ochie Mummy
A na-ekpuchi nne mama nwanyị nke afọ 3,000 na njide zoro ezo. Nwanyị ahụ, bụ obodo a na-akpọ Deir el-Medina, Egypt, bụ otu nwanyị nke ji obi ụtọ tinye ihe ndị dị nsọ n'olu ya, n'ubu ya, na azụ ya, na-ama okooko osisi na etuto ya, na ehi na aka ya.
Aka na akwara
A hụrụ mama n'ime obodo Deir el-Medina. Rịba ama na anya ndị na-ahụ anya na-egosi ọnya ụfọdụ, ma ndị ọzọ nọ n'akụkụ nke ahụ nke resins ji mee ka ọ bụrụ ihe na-egbu egbu.
N'iji ihe ngosi infrared, onye ọkà mmụta ihe omimi Ghada Darwish Al-Khafif nwere ike ịhụ egbu a nke ehi abụọ, na-anọchi anya chi nwanyị bụ Hathor. Ọ na-ejikwa ndetu ederede iji kwụọ ụgwọ maka mbigharị nke onyinyo ahụ site na ịchọrọ anụ ahụ mummy.
Ghada Darwish Al-Khafif onye na-ahụ maka ọdịdị ahụ na-eji ihe nkiri infrared ịhụ ọnyà na akpụkpọ ahụ mebiri emebi.
Gụ akụkọ zuru ezu ebe a
akara ntụpọọnwa tattoosụmụnne mgbuaka akamma tattoosenyi kacha mma enyiakpị akpịụkwụ akaudara okooko osisikoi ika tattooegbu egbu osisi lotusima ima mmaegbu egbu maka ụmụ nwokeEgwu ugoegbu egbundị na-egbuke egbukemehndi imeweegbu egbu egbuegbu egbu okpun'olu oluagbụrụ ebona-egbu egbuegbugbu egbugbuarịlịka arịlịkaegbu egbu hennaechiche egbugbunnụnụAnkle Tattoosegbu egbu diamondegbu egbu mmiriokpueze okpuezeọdụm ọdụmegbugbu maka ụmụ agbọghọaka mma akaakwara obiegwu egwuUche obienyí egbu egbuỤdị ekpomkpaNtuba ntugharindị mmụọ ozirip tattoosaka akadi na nwunyeegbu egbu ebighi ebingwusi pusiazụ azụzodiac akara akaraGeometric Tattoosna-adọ aka mma